काठमाडौ । के तपाईं २०२० को विश्‍वको सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरू को हुन् भनेर जान्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने आज हामी तपाईंलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ । सुन्दरता महिलामा सीमित छ जसले सेलिब्रेटीको एक उचित स्तर हासिल गर्दछ ।
आज संसारमा सब भन्दा बलियो, बुद्धिमान, वाञ्छनीय, लोकप्रिय, आकर्षक र सबैभन्दा सफल महिलामा आधारित सुची रहेको छ । तर सूचिहरूको प्रेरणादायक बहसको एक तरीका छ । तपाईं हाम्रो शीर्ष १० सुन्दरीहरुको बारेमा के सोच्नुहुन्छ आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुन्छ । आउँनुहोस् जानकारी लिउ सन् २०२० का शीर्ष १० सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरू
All Picture Source :- wonderslist.com
१०, मीसा कुरोकी : ३१ वर्षीया मीसा कुरोकी एक नाम चलेकी चर्चित जापानी अभिनेत्री हुन् । उनी जापानको होटीमा प्रकाशित सबैभन्दा सुन्दर महिला २०२० को सूचीमा पनि रहेकी छिन् । एक अभिनेत्री, मोडेल र गायिका मीसा कुरोकी केवल सुन्दर मात्रै नभई उनी एक सरल स्वभाव भएकी अभिनेत्री हुन् । आधा पानामियाली पिता र जापानी आमाबाट जन्मेकी कुरोकी एक चौथाई ब्राजिलियन हुन भन्दा फरक पर्दैन ।
उनको अभिनय र मोडेलिङ कार्यको अतिरिक्त, उनले दुई फोटोबुक प्रकाशित गर्छिन् । कुरोकी अन्तर्राष्ट्रिय फेशन ब्राण्ड, एम्पोरियो अरमानीको जापानी अनुहार हुन् । फ्रेन्च कस्मेटिक ब्रान्ड ल ओरालको अन्तर्राष्ट्रिय अनुहार हुन् । उनी विश्वभरि यी ब्रान्डहरूको लागि असंख्य कार्यक्रमहरूमा देखा पर्छिन् । उनी हाल अमेरिकी फिल्म ‘प्रेमको प्रक्रिया’ अर्थात द प्रोसेस अफ लभको शूटिङ्गमा व्यस्त छिन् ।
९, गाल गाडोट : ३५ वर्षीया गाल गाडोट एक सच्चा साहस भएकी महिला हुन् । उनी धेरै पुरस्कार विजेता इजरायली अभिनेत्री हुन् । उनलाई एक ठूलो मानवतावादी महिलाको रुपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । गाल गाडोट भित्रबाट मात्र होईन बाहिर पनि सुन्दर छिन् । उनी बच्चाहरूको अस्पतालमा गएर र पेन्सिल अफ प्रोमिस संगठनको लागि वकालत गरेर धेरैको मनमा बस्न सफल भएकी छिन् ।
उनले विद्यालयहरू निर्माण गर्न र गरिब बच्चाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिन पैसा जुटाउने काम पनि गरेकी छिन् । इजरायलकी सुन्दर अभिनेत्री र मोडल तब प्रख्यात भइन् जब उनी १८ वर्षको उमेरमा मिस इजरायल २००४ को विजेता भएकी थिइन । हलिउडमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले उनले इजरायल डिफेन्स फोर्समा फिटनेस, लडाई तत्परता प्रशिक्षकको रूपमा सेवा गरिसकेकी छिन् ।
८, रोजे : २३ वर्षीया रोजे दक्षिण कोरियाकी चर्चित गायिका हुन् । प्यारो अनुहार, उनको स्टेज नाम रोजेले अझ राम्ररी परिचित छिन् । रोजे एक गायिका र केटीहरुको समूह ब्ल्यापपिंकको सदस्य हुन् । साथै, एकल कलाकारको रूपमा, उनले वाईजी मनोरन्जनका साथ अझ धेरै वर्ष काम गरेकी छिन । उनको अद्वितीय आवाजको कारण उनलाई आजको युवाहरूले धेरै मनपराउँदछन् ।
रोजलाई धेरैले रोल मोडेलको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । उनको क्यूटनेस, सेलिब्रिटीको स्तर र फ्यान फलोइङ्गका कारण, रोजले २०२० को ८औं सबैभन्दा सुन्दर महिलाको नाम आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन् । उनी दक्षिण कोरियाली आप्रवासी अभिभावबाट न्यूजील्याण्डमा जन्मेर हुर्केकी हुन् । रोजे ३ करोड ३० लाख भन्दा बढी अनुयायीहरूको साथ इन्स्टाग्राममा चर्चित छिन् । थप रूपमा, रोजेले कोरियाली व्यवसाय अनुसन्धान संस्थानको महिला सेलिब्रिटी ब्रान्ड प्रतिष्ठा सूची २०१८ पछि आवद्ध छिन् । उनी सबै भन्दा अनलाइन खोजी हुने कलाकारहरुमा पनि पर्छिन ।
७, हेन्डे एरेल : यो सम्भवतः कुनै आश्चर्य छैन कि हेन्डे एरेल युवाहरुमा धेरै लोकप्रिय छिन् । अनुसन्धानले देखाउँदछ कि मान्छेहरु ५० वर्षको उमेर सम्म उस्तै हुन्छन् तर महिलाहरुको उमेर २० देखि २४ वर्षका बीचमा रहेको हुन्छ । यो उमेरमा महिला सबैभन्दा सुन्दर हुन्छन् । यस भिडमा टर्कीकी अभिनेत्री र मोडेल यस बर्ष फेरी सूचीमा परेकी छिन् ।
हेन्डे एरेल विश्वका सुन्दर महिलाहरुको सुचीमा अटाएको यो पहिलो पटक होइन । वास्तवमा उनी सन् २०१९ मा सूचीमा शीर्ष स्थानमा थिइन् । उनको सुन्दरता विदेशमा धेरै चर्चा गरिएको छ । टर्कीमा जस्तै उनी पनि भारत, पाकिस्तान र मध्य पूर्वमा लोकप्रिय छिन् । २७ वर्षीया एरेल उनको अभिनायका कारण पनि सबैको मनमा बस्न सफल भएकी छिन् ।
६, इमिलिया क्लार्क : इमिलिया क्लार्क जीवित सबैभन्दा आर्कषक महिलाहरुमा एक हुन् । गेम अफ थ्रोन्स स्टार समेत रहेकी उनी २०२० का १० सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरुको छैठौं स्थानमा सूचीबद्ध भएकी छिन् । अन्य धेरै सुन्दर महिलाहरू जस्तै, क्लार्कसँग पनि अविश्वसनीय गुणहरु रहेका छन् । उनको छालामा, उनीसँग धेरै गुणहरू छन् जसले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ । क्लार्क, उनको ओठ र उच्च गालाका हड्डीका साथ, विश्वभरका मानिसहरूमा चर्चित छिन् । ३४ वर्षीया उनी बेलायतकी अभिनेत्री हुन्, उनी पनि सबैभन्दा सुन्दर महिला मध्ये एक भएकी छिन् ।
५, प्रियंका चोपडा : बलिउडकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ३८ वर्षीया प्रियंका चोपडाका लागि कुनै परिचयको आवश्यक्ता पर्दैन् । उनी विश्वभर करोडौंको मनमा बस्न सफल भएकी छिन् । उनलाई एक पूर्व विश्व सुन्दरीका रुपमा पनि मान्छेहरुले चिन्ने गरेका छन् । उनी फेरि यो दुनियाँको सबै भन्दा सुन्दर महिलाहरुमा आफुलाई पनि अटाउन सफल भएकी छिन् ।
चोपडालाई लन्डनमा रहेको ईस्टर्न आई द्वारा साप्ताहिक आर्कषक एशियन महिलाको रूपमा पनि शिर्ष स्थान दिइएको थियो । एक बर्ष पहिले, बुज्नेटले गरेको सर्वेक्षणमा उनी विश्वको दोस्रो सुन्दर महिला थिइन् । प्रियंका चोपडा सबैभन्दा प्रसिद्ध, सब भन्दा धेरै कमाई गर्ने र उच्च प्रोफाइल भएकी भारतीय अभिनेत्री हुन् । उनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार र पाँच फिल्मफेयर पुरस्कार सहित असंख्य पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् । यसका साथै उनले युनिसेफको सद्भावना दूतको रूपमा पनि काम गरेर मानवीय पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् ।
४, कमिला क्याबेलो : २३ वर्षीया कमिला क्याबेलो क्युबाली–अमेरिकी पप गायक र गीतकार हुन् । उनी पहिले फिफथ हार्मोनी समूहसँग पनि आवद्ध रहेकी छिन् । यस सुचीमा उनी ४औं स्थानमा रहेकी छिन् । यस क्युबाली–अमेरिकी उनले आफु कक्षा ९ मा हुँदा देखि नै गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । सन् २०१२ मा उनी एक्स फ्याक्टरको केटी समूह फिफथ हार्मोनीको सदस्यको रूपमा प्रतिष्ठित भएकी थिइन ।
त्यसबेलादेखि उनले आफ्नो क्यारियरभरि धेरै पुरस्कारहरू जितिन्, जसमा दुई ल्याटिन ग्र्यामी पुरस्कार, पाँच अमेरिकी संगीत पुरस्कार, र एक बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड पनि समावेश छ । यसका साथै उनले तीनवटा ग्र्यामी अवार्डमा नामांकन पनि भइन् । उनको सम्मान गर्दै टाइम पत्रिकाले उनलाई सन् २०१६ विश्वमा सबैभन्दा प्रभावशाली किशोरीको सूचीमा स्थान दिएको थियो ।
३, सोन ये जिन : दक्षिण कोरियाली अभिनेत्री सोन ये जिन २०२० को लागि तेस्रो विश्वको सबैभन्दा सुन्दर महिलाको स्थानमा पर्न सफल भएकी छिन् । ३८ वर्षीया जिन दक्षिण कोरिया फिल्म र टिभीमा सबैभन्दा प्रख्यात नाम हो । रोमान्स–थीमाधारित फिल्महरू र टेलिभिजन शृङ्खलामा मुख्य भूमिका खेल्दै उनी प्रख्यात भएकी थिइन ।
२, मार्गोट रोबी : ३० वर्षीया मार्गोट रोबी एक चर्चित अभिनेत्री हुन् । सन् २०२० का सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएकी छिन् । सायद, यस सूचीमा भएका सबैभन्दा प्रसिद्ध महिलाहरुमा पनि उनको नाम आउँछ ।
उनको आकर्षक लुकका कारण, अष्ट्रेलियाली अभिनेत्री धेरै अनलाइन सूचीमा क्रमबद्ध गरिदैँ आएकी छिन् । टाइम्स पत्रिकाले उनलाई सन् २०१७ मा विश्वको १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरूभित्र राखेको थियो । यसका साथै उनी २०१९ मा विश्वको सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने अभिनेत्रीहरु मध्ये एक भएकी थिइन् ।
१, सेलेना गोमेज : लोकप्रिय अमेरिकी गायक, र गीतकार सेलेना गोमेज २०२० को सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरुको सुचीमा पहिलो स्थामा पर्न सफल भएकी छिन् । २७ वर्षीया सेलेनाले लाखौं मानिसहरूलाई उनको गीतका साथ झुमाएकी छिन् । संगीतको साथसाथै, नयाँ फेशन ट्रेन्डहरूको साथ अपडेट गरिएको, सेलेना पक्कै पनि एक सही फेशन आइकन हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
टाउको देखि पाउसम्म उनी सुन्दरताको एक धमाका हुन् । उनी सँधै सबैका लागि प्रेरणा हुन्, संगीत वा फेसनको मामलामा उनलाई पछ्याउनेहरु कराडौंमा रहेका छन् । उनी सुन्दर मात्र होईनन् तर सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा लोकप्रिय र सबैभन्दा अनुसरण गरिएको व्यक्ति मा पर्छिन । गत वर्ष उनी सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा थिइन् ।
विवाह गर्ने तयारीमा चर्चित नायिका कीर्ति सुरेश, यी हुन दुलाह ?
बलिउडले गुमायो एक चर्चित कलाकार, रहेनन् अक्षय कुमारसँग काम गरेका अभिनेता